Maamulka Jubaland oo soo Bandhigay nin ay Sheegeen inuu Suubinayay Waxyaabaha Qarxa (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
Maamulka Jubaland oo soo Bandhigay nin ay Sheegeen inuu Suubinayay Waxyaabaha Qarxa (SAWIRRO)
HMN:- Ciidamada maamulka Jubaland ayaa soo bandhigay nin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay Ururka Al Shabaab, kaasi oo waxyaabaha qarxa ku farsameynaayay guri ku yaala magaaladaasi.
Ninkani ayey ciidamada Nabad Suggida Jubbaland muddo ku dabajoogeen, waxana ay ogaayeen in ninkani uu kamid ahaa, ragga amnidarada ka waday Magaalada Kismaayo.
Taliye ku xigeenka ciidamada Nabad Suggida ee Maamulka Jubbaland Axmed Cabdullahi Ciise ( Gaas) ayaa sheegay in ninkani ay ciidamada soo qabteen, xilli uu isku dayaayay inuu ka baxsado gacanta ciidamada Nabad Suggida.
Wuxuuna sheegay in markii ninkani uu isku dayay inuu ka baxsado gurigii uu ku sugnaa ay ciidanku rasaas ku fureen, kadibna uu dhaawac ka soo gaaray rasaastaasi, sidaasina lagu soo qabtay.
Taliye ku xigeenka Nabad Suggida Jubbaland ayaa sheegay in markii ninkaasi gacanta lagu dhigay, la baaray gurigiisa lagana soo saaray waxyaabaha qarxa oo uu ku farsameynaayay hoygii uu ku noolaa.